Miely fa ny tsirairay amintsika dia afaka mahita ny dika mitovy aminy eto an-tany - indroa. Ary ny sasany, raha vintana, na roa na telo.
Saingy ireo vahoaka malaza dia tsy mila manao na inona na inona amin'izany, satria, toy ny ao amin'ny lanitra feno kintana, toa mitovitovy fotsiny izy ireo, ary avy eo dia miparitaka ireo kintana mitovy amin'ny kaontinanta samihafa!
Raha tsy izany, nahoana isika no mahita any amin'ireo olom-pirenenay tandrefana havanay?
1. Sarah-Jessica Parker sy Julia Kovalchuk
Na inona na inona lazainao, ireo roa ireo dia azo antoka fa hisolo toerana azy amin'ny sehatra na sehatra, ary ny tena manintona indrindra dia hahita ny fanoloana!
2. Johnny Depp sy Dima Bilan
Iza moa no nieritreritra fa ny volombava iray maingoka dia manamboatra mpihira mahafinaritra izay mitovy amin'ny halatra ara-pananan'ny Hollywood? Ary angamba tsy izany, ary io Johnny Depp io dia nandray ny tenany ary nahita modely mendrika.
3. Tim Roth sy Roman Abramovich
Ary nieritreritra ianao hoe nahoana ny mpilalao britanika no nizara ny anjara andraikitry ny ologarka Rosiana tao amin'ny horonantsary "Mobius"?
4. Amanda Seyfried sy Ekaterina Vilkova
Mpilalao sarimihetsika roa manan-talenta manana ny karazany mitovy, ny endri-javatra maro hafa, ny lokon'ny volom-borona ary ankoatra izany dia mitovy taona izy ireo. Amin'ny teny iray, ity no tranga raha tsy misy mahatsikaritra ny fisoloan-tena "eo amin'ny toeram-piasana", ary tsy mahita mihitsy aza ny fahasamihafana!
5. Matt Damon sy Garik Kharlamov
Androany, ny fitovian'ny Club Comédie comédieux miaraka amin'ny mpilalao sarimihetsika malaza dia tsy mahita raha tsy hoe jamba, ary na dia maro kokoa aza - mino ireo mpankafy fa i Garik dia tahaka ny Damon Oscar-nahazo fandresena, toy ny rano roa rano ary afaka mamaky mora azy ao anaty. Raha ny marina, raha samy tsy mikasa ny handany lanja ...
6. Colin Farrell sy Peter Fedorov
Ankehitriny dia takatsika fa ny sangisangy momba ny kloning dia toa tsy sangisangy! Angamba izy ireo dia mpirahalahy?
7. Meryl Streep sy Larisa Udovichenko
Ny mpilalao sarimihetsika Larisa Udovichenko, mpilalao horonantsary, dia naheno im-betsaka ny adiresiny, izay mitovy amin'ny mpiara-miasa aminy any Hollywood. Saingy ankoatra ny angon-drakitra mitovy amin'izany, ireo mpilalao sarimihetsika ireo dia manana fomban-javatra iombonana - izy ireo dia samy mahery, tsy matahotra ny fahasarotana ary mora manaiky ny anjara andraikitra faharoa, manadino ny laharana sy ny toerany!
8. Vincent Kassel sy Konstantin Kryukov
Ny olona iray dia mihevitra fa ny fitovian'ireo mpilalao dia "voasoloky ny sofina", ary hita amin'ny ankapobeny, saingy manaiky ianao - izy ireo dia miray tsikombakomba manokana, manintona sy manintona!
9. Mila Jovovich sy Dance Lada
Fantatrao ve? Raha manana stylista iombonana i Mila sy i Lada dia tsy ho nanavaka azy ireo mihitsy ianao!
10. Al Pacino sy Veniamin Smekhov
Adikao fotsiny izahay, ary nahoana no tsy hitanay mialoha izany?
11. Macaulay Culkin sy Vladimir Putin
Toa izao no fantatsika ankehitriny hoe ahoana no hijerena ny kintan'ny kanto indrindra amin'ny taombaovao indrindra ao anatin'ny telopolo taona!
12. Penelope Cruz sy Tina Kandelaki
Toa ara-bakiteny ny filazan'ny mpanao gazety sy ny mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny fomba mahavariana ny fitoviana amin'ny mpilalao sarimihetsika Espaniôla, ary amin'ny alàlan'ny paikady plastika roa dia tsy hisongadina intsony izy ireo!
13. Leonardo DiCaprio sy Roman Burtsev
Roa taona lasa izay, ireo tambajotra sosialy dia nanolotra antsika fahatsapana iray hafa - nahamarika ny mpampiasa fa mitovy amin'ny an'i Leonardo DiCaprio ny lehilahy tsotra iray avy ao Podolsk izay miasa ao amin'ny sampan-draharaha ara-teknolojian'ny fanohanana ny asa fanavotana, ary nanendry azy ho dingana roa lehibe indrindra amin'ireo olo-malaza! Ary raha toa ny fiheverana vaovao an'i Roman Burtsev tamin'ny voalohany dia nahatonga ny fisainana be loatra sy ny tsy fahavitrihana aza, ankehitriny dia "nahazatra ny anjara andraikitra" izy - nanomboka nahazo tolotra ara-barotra, nitsidika tsy tapaka ny fahitalavitra ary nanambara mihitsy mihitsy aza!
14. Daniel Radcliffe sy Nikolay Sechin
Azo antoka - ireo kintana ireo dia niparitaka nanerana ny kaontinanta samihafa! Raha ny tena marina, ny dikanteny marina nataon'i Daniel Radcliffe dia i Nikolay Sele, miaina ao Krasnoyarsk ary tsy misy ifandraisany amin'ny kintana sy olo-malaza. Na dia tsia ... Hatramin'ny nanombohan'ny bandy solomaso, tsy misy fisalasalana intsony, dia nisotro gazy namboarin'i Harry Potter izy ary nanjary toy ny azy! Ankehitriny, ny lazan'i Nicholas dia lasa lavitra ny faritry ny tanàna - efa an-jatony ny tovovavy ao amin'ny nofinofy any an-drenivohitra, ary feno ny hafatra ny "lichka"!
25 zanaka olo-malaza, mitovy amin'ny ray aman-dreniny
Inona no tsaratsara azon'ny Oscar amin'ny 2017: 10 amin'ireo fotoana faran'izay malaza sy mahatsikaiky amin'ny lanonana
Rovantsika ny saron-tava: ahoana ny endrik'ireo maherifon'ny "Game of Thrones" amin'ny fiainana tena izy
16 fanovana malaza
Lindsay Lohan, Janet Jackson ary ireo olo-malaza hafa izay nanaiky tampoka ny finoana silamo
15 olo-malaza, izay mety tsara ny anjara asan'ny Princess Disney!
Kintana 10, ny mpankafy no sokajiana ho mpiara-miasa aminy
Irina Sheik, Amanda Seyfried ary kintana hafa izay miomana ho tonga reny amin'ny 2017
Toetry ny torimaso sy ny dikany
Aranjo "Pandora" amin'ny tananao
Mitombo ny tsindry amin'ny vohoka
Famaritana spermogrammy: inona no manjo ny kalitaon'ny sperm sy ny fomba hampitomboana ny fihenan'ny spermia?
Sakam-boankazo marinated - fantsom-bovoka mahavoky hafakely
Gout - famantarana sy fitsaboana
Famerenana aorian'ny fampiofanana
Casserole avy amin'ny akoho fofom-bary
Fivarotana any Tel Aviv
Mampitombo ny fitomboan'ny entona ao amin'ny tsinay - ny antony, ny fitsaboana
Mamboatra ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny amin'ny fomba maoderina